यसरी भयाे सहमति, ताेडियाे डा केसीकाे अनसन (सहमतिपत्र सहित) | mulkhabar.com
July 26, 2018 | 5:27 pm 215 Hits
काठमाडौं- लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधारको लागि भन्दै आमरण अनशनमा बसेका डा गोबिन्द केसीले बिहिवार राती झन्डै १०:३० बजे अनशन तोडेका हुन।
डा गोविन्द केसीले डा केदारभक्त माथेमाको हातबाट जुस खाँदै आफ्नो १५ औँ अनशन तोडेका हुन ।
सरकार र डा केसीका प्रतिनिधिबीच अड्किएको बुँदामा सहमित भएसँगै बिहीबार राति करिव साढे दसबजे डा केसीले अनशन तोड्न सहमति जनाएका हुन्। उनको अनशन तोडाउन टिचिङस्थित अनशनस्थलमा सरकारका तर्फबाट नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेवाङ र नेता विष्णु पौडेल पुगेका थिए।
डा केसीलार्इ काठमाडौं ल्याइसकेपछि नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको विशेष पहलमा बनेको वार्ताको वातावरण अनरुप मंगलबार दुवै पक्षबीचको संवाहिनता तोडिएको थियो।
अनशन तोडेलगत्तै डा केसीलार्इ आइसियुमा लगिएको छ। उनलार्इ आइसियुको बेड नम्बर एकमा राखेर उपचार गरिँदै छ। लामो अनशनका कारण उनको स्वास्थ्यावस्था निकै नाजुक बनेको उपचारमा संलग्न डाक्टरहरूको भनाइ छ। डा केसी चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै २७ दिनदेखि अनशनरत छन्।
लामो अनशनका कारण उनको स्वास्थ्यावस्था नाजुक बन्दै गएको उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन्। उनले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनशन पसेको १५औँ पटक हो।
डा केसीले अघि सारेको मुल विषय माफिया मुखि विधेयक फिर्ताको विषयमा सरकारी पक्ष सकारात्मक नहुँदा वार्ता विफल भएको जनाइएको थियो। बुधबारको वार्तामा सरकारी पक्षले छलकपट गरेको भन्दै केसी पक्षका वार्ताकारहरुले वार्ता छाडेका थिए। उनीहरुले बिज्ञप्ति जारी गरेर सरकार संवेदनहिन बनेकोसमेत आरोप लगाएका थिए।
यसअघि डा केसी जुम्लामा रहँदै पनि तीनपटक वार्ता भएको थियो । तर, त्यो वार्ताले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि डा केसी पक्षले सचिवस्तरीय वार्ता टोलीसँग विधेयकका सम्बन्धमा कुनै पनि म्यान्डेट नभएको भन्दै डा. केसी पक्षधरले वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेका थिए। बिहिवार प्रधानमन्त्रीको विशेष पहलमा सम्सद बाट सुनुवाई हुने गरि केसिको अनशन तोडाईएको छ।
डा. केसीले अघि सारेका मागहरु
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस्। तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगायत कामहरु सुचारु गरियोस्।
२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातकोतर तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस्। पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् ।
४)चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस्। त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस्।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।